ILevitikus 14 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
Porovnání s překladem: American Standard Version Basic English Bible Darby Version Douay-Rheims Kempton Translation King James Version Webster's Bible World English Bible Young's Literal Translation 한국 성경 (Korean) พระคัมภีร์ไทย Afrikaanse Vertaling 1953 Det Norsk Bibelselskap (1930) Bible kralická Det Danske Bibel Elberfelder Bibel (1871) Elberfelder Bibel (1905) Lutherbibel (1545) Lutherbibel (1912) Eestikeelne piibel Reina Valera (1909) Sagradas Escrituras (1569) Esperanto Biblé Bible Louis Segond (1910) Bible Martin (1744) Hrvatski prijevod Xhosa Giovanni Diodati Bibbia (1894) Riveduta Bibbia (1927) Vulgata Clementina Litova Biblio Károli (Vizsoly) Biblia Dutch Staten Vertaling Almeida Atualizada синодальный перевод (1876) Serbian (Daničić, Karadžić) Pyhä Raamattu (1933/1938) Vuoden 1776 kirkkoraamattu 1917 års bibelöversättning Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Vietnamese Bible (1934) Turkish Bible Arabic: Smith & Van Dyke Hebrew: Modern Hebrew OT: BHS (Consonants Only) Hebrew OT: BHS (Consonants & Vowels) Greek: Modern Greek OT: LXX [A] Accented Greek OT: LXX [A] Accented Roots & Parsing Greek OT: LXX [A] Unaccented Greek OT: LXX [A] Unaccented Roots & Parsing 新中文版 (简体) 新中文版(繁体) 联盟版(简体) 联盟版(繁体) Japanese Bible 口語訳聖書
4 awise umthethoumthetho umbingeleli, ukuba lowo uzihlambululayo athatyathelwe iintakaiintaka ezimbini eziphilileyo, ezihlambulukileyo, nomsedare, noboya obubomvu, nehisope.
5 Wowisa umthethoumthetho umbingeleli, enye intakaintaka empahleni yomdongwe ixhelelwe phezu kwamanzi aphilileyo;
6 ayithabathe intakaintaka ephilileyo, nomsedare, noboya obubomvu, nehisope, azithi nkxu, ndawonye nentaka ephilileyo, egazini lentaka exhelelwe phezu kwamanzi aphilileyo;
7 amfefe lowo uza kuhlanjululwa eqhenqeni lakhe izihlandlo zibe sixhenxe, athi uhlambulukile, ayindulule intakaintaka ephilileyo iye ezindle.
8 Lowo uzihlambululayo wozihlamba iinguboiingubo zakhe, achebe zonke iinweleiinwele zakhe, ahlambe emanzini, ahlambuluke ke. Emveni koko wongena eminqubeni, ahlale ngaphandle kwentente yakhe imihla esixhenxe;
9 kuthi ngomhla wesixhenxe, achebe zonke iinweleiinwele zakhe entloko, nasesilevini sakhe, nasemashiyini akhe, azichebe zonke iinweleiinwele zakhe, azihlambe iinguboiingubo zakhe, ahlambe umzimba wakhe emanzini, ahlambuluke ke.
10 Ngomhla wesibhozo wothabatha iimvanaiimvana ezimbini ezigqibeleleyo, nemvanazana emnyaka mnye egqibeleleyo ibe nyenye, nezahlulo ezithathu zesishumi zomgubo ocoliweyo, ube ngumnikelo wokudla, ugalelwe ioli, neloge yeoli ibe nyenye;
11 umbingeleli ohlambululayo ayimise indodaindoda ezihlambululayo, nezo zinto, phambi koYehova emnyango wentente yokuhlangana.
12 Woyithabatha umbingeleli enye imvanaimvana, ayisondeze ibe lidini letyala, neloge yeoli, azitshangatshangise zibe ngumtshangatshangiso ezo nto phambi koYehova;
13 ayixhelele imvanaimvana apho kuxhelelwa khona idini lesono nedini elinyukayo, endaweni engcwele; kuba, njengokuba lilelombingeleli idini lesono, likwanjalo idini letyala: liyingcwele kangcwele.
16 awuthi nkxu umbingeleli umnweumnwe wakhe wasekunene eolini esesandleni sakhe sasekhohlo, afefe inxalenye yeoli ngomnwe wakhe izihlandlo ezisixhenxe phambi koYehova.
21 Ukuba uthe waba sisweli, nesandla sakhe asaba nakukufumana oko, wothabatha imvanaimvana ibe nyenye, ibe lidini letyala lokutshangatshangisa, amcamagushele, nesahlulo seshumi somgubo ocoliweyo, ugalelwe ioli, sibe sinye, ube ngumnikelo wokudla, neloge yeoli;
22 namahobe amabini, nokuba ngamagobo amabini evukuthu, esinokuwafumana isandlaisandla sakhe, elinye libe lidini lesono, elinye libe lidini elinyukayo.
24 Umbingeleli woyithabatha imvanaimvana elidini letyala, neloge yeoli, ezo nto umbingeleli azitshangatshangise zibe ngumtshangatshangiso phambi koYehova;
25 ayixhele imvanaimvana yedini letyala; acaphule umbingeleli egazini ledini letyala, alidyobhe esithinzini sendlebe yasekunene yalowo uzihlambululayo, nasesithupheni sesandla sakhe sasekunene, nakubhontsi wonyawo lwakhe lwasekunene.
30 Wolinikela elinye ihobeihobe, nokuba lelinye igobo levukuthu, esinokulifumana isandlaisandla sakhe,
31 oko sinokukufumana isandlaisandla sakhe; elinye libe lidini lesono, elinye libe lidini elinyukayo, ndawonye nomnikelo wokudla, umbingeleli amcamagushele lowo uzihlambululayo phambi koYehova.
36 Wowisa umthethoumthetho umbingeleli, ukuba bayikhuphe impahla endlwini, engekangeni umbingeleli ukuba asikhangele isibetho, ukuze ingabi yinqambi yonke into esendlwini; emveni koko wongena umbingeleli ukuba ayikhangele indluindlu.
38 wophuma umbingeleli endlwini, aye emnyango wendlu, ayivale indluindlu imihla esixhenxe.
40 aze awise umthethoumthetho umbingeleli, ukuba arholwe amatyeamatye esikuwo isibetho eso, aphoswe ngaphandle komzi endaweni eyinqambi;
41 ayiphale indluindlu ngaphakathi ngeenxa zonke, bawuphose umhlaba abawuphalileyo ngaphandle komzi endaweni eyinqambi;
42 bathabathe matye wambi, bawafake endaweni yaloo matye, kuthatyathwe olunye udaka, ityatyekwe indluindlu.
45 Yodilizwa indluindlu namatye ayo, nemithi yayo, nodaka lonke lwendlu, zikhutshelwe ngaphandle komzi ezo zinto, ziye kulahlelwa endaweni eyinqambi.
47 Lowo ulele kuloo ndlu, wozihlamba iinguboiingubo zakhe; nalowo udlele kuloo ndlu, wozihlamba iinguboiingubo zakhe.
48 Ukuba umbingeleli utheuthe wangena, wakhangela, O! isibetho asiqhenqethanga endlwini emveni kokutyatyekwa kwendlu, umbingeleli wothi ihlambulukile indluindlu, ngokuba isibetho siphilisiwe.
49 Wothabatha into yokuhlambulula indluindlu: iintakaiintaka zibe mbinimbini, nomsedare, noboya obubomvu, nehisope.
50 Maze ayixhelele enye intakaintaka empahleni yomdongwe phezu kwamanzi aphilileyo; awuthabathe umsedare, nehisope, noboya obubomvu, nentaka ephilileyo, azithi nkxu egazini lentaka exheliweyo, nasemanzini aphilileyo,
51 ayifefe indluindlu izihlandlo zibe sixhenxe;
52 ayihlambulule indluindlu ngegazi lentaka leyo, nangamanzi aphilileyo, nangentaka ephilileyo, nangomsedare, nangehisope, nangoboya obubomvu.
53 Woyindulula intakaintaka ephilileyo iye ngaphandle komzi, iye ezindle, ayicamagushele indluindlu; yohlambuluka ke.
55 nakulo iqhenqaiqhenqa lengubo, nelendlu,
Arcana Coelestia 643, 716, 870, 2906, 3147, 3301, 4236, ...4735, 4922, 5954, 7430, 7839, 7918, 9468, 10042, 10061, 10129, 10296
ILevitikus 1:3, 10, 2:1, 3, 10, 4:6, 17, 20, 26, 31, 35, 5:7, 11, 15, 7:2, 8:11, 23, 24, 27, 10:10, 11:24, 25, 27, 28, 31, 32, 39, 40, 13:3, 4, 6, 47, 51, 59, 14:4, 5, 6, 34, ...50, 55, 15:14, 16:22, 20:24, 21:22, 22:4
Amanani 8:7, 19:6, 12, 19
IDuteronomi 24:8, 32:49